Cali Khaliif oo ku sugan Degmadda Widhwidh ee Gobalka Cayn.. | | Horufadhi Online
Cali Khaliif oo ku sugan Degmadda Widhwidh ee Gobalka Cayn..
Wararka naga soo gaadhay magaalada Widh-widh ee Gobolka Cayn ayaa waxay sheegayaan inuu Halkaasi ku sugan yahay Dr. Cali Khaliif Galaydh Madaxwaynihi Khaatumo.
Dr. Cali Khaliif ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeisa, Wuxuuna Halkaasi gaadhay markii ay Bilaabatay Doorashadii uu kusoo baxay Muuse Biixi Cabdi, Waxaana uu Warbaahinta dhowr jeer ka sheegay inuu kulamo la qaatay Muuse Biixi, Islamarkaana uu kala hadlay dhaqan gelinta Heshiiskii uu la galay Xukuumadii Siilaanyo ee meesha ka baxday.
Lama oga Waxyaabaha uga soo qabsoomay Arintaasi iyo Wuxuu kala kulmay Muuse Biixi, Sidoo kalana Kama uusan hadal safarka uu joogo magaalada Widh-widh.
Short URL: https://horufadhimedia.com/?p=55490
4 Comments for “Cali Khaliif oo ku sugan Degmadda Widhwidh ee Gobalka Cayn..”
January 13, 2018 - 8:11 am
ASC. MEESHAADAA KA HAY, mashruuca NGOgaaga ee Hargaysa meel fiican buu nooga soo baxay!
Dhinaca kale, annaga mashruuceennii Muqdisha meel ka siifiican buu noo marayaa. Waad malqayseen ISIMADII SSC warka ADAG ay soo saareen. XABBAD lala cararo iyo maleeshiyaad kolba dhinac loo didiyo halna tari maydo. Waxaa waa laga soo gudbay.
SI KASTABA, turxaan bixinta maamulkeennii oo gaarsiisan illaa DHAHAR iyo QAW dhakhsuu imanayaa, isha hallagu hayo. Inta ka horraysa JIIRKU ha iska sii ciyaarro. Wbt
January 13, 2018 - 8:46 am
Madaxweynihii, wuu soo guryo noqday, wuxuu wado, yaan laga hor dhicin. Dhanka kale, duubabkii reerka qaarkood, hadda waxay isu bedeleen askar, bilaadu bint amarto, dadkoodana lagu garaaco, ceebaha, bilaadu bintna ay sidii saalada sagaarada u aasaan ( 2007 ilaa 2017).
Ceegaag, waa lagugu wareeray. Marka aad ka garnaqsatid, wiilka Abtaa loo yahay, sida aad dadka-haybta iyo degaanka u kala taqaanid + doodaada, waxa aad u ek tahay nin u dhashay Ceegaag/khatumo, haddana marka aad beladii laguugu malayn jirey dhabayacada, aad soo malmaluuqdid, dareen baa soo baxa…
Ceegaag iyo inta la fekerka ah, meesha waxa yaal, waa masiir ummaddeed, caqaar/jaada iyo waslad/bariisa, degaanku ma jooggo. Dadkan hashii Khatumo doonaya inay jiscintaan (af ku maal), oo ku sidkaan meel aanay geyin, laga yeeli maayo, Duub danleya iyo tuug-siyaasi ku shaqaysta.
F.G Maanta, haddii uu M/weynuhu ka noqdo, heshiiskii in la heshiiyo ahaa saxeexiisu, wax kalay sheegi. WBT
January 13, 2018 - 2:50 pm
Marka xaqiiq laga hadlo cid ammaanani ma jirto reer SSC, ha ahaadeen ISIMMO ama SIYAASIYIINBA ee uu ugu horreeyo DAGAAL OOGE ina GALAYR.
Muhiimaddu waxa weeye, marka ay halkaa botorinayso, maanta beeshu ma u baahantahay in ay yeelato SHIR GUUD oo turxaan bixin ah? Anigu waxa aan qabaa HAA, marka la eego duruufaha ku xeeran oo ay ugu danbayso TUKA-RAQ.
Tusaale, haddii arrinka Tukaraq fogaato, waxa ugu badan ee ku RIIQMAYAA waa Dhuloos ee maaha MJ ama Isaaq. Marka sabab uu ina Galayr u yiraahdo YOOCADA halla soo taabto, oo adna aad ku taageerto, maba garanayo. Yoocadu cidla maaha rag baa jooga, kibirka iyo gardarradana lama mahadiyo sida badan.
Midda kale oo aan ku xasuusinayaa waxa weeye, dhacdadii Kalshaale ee iyadana gardarrada iyo kibirka loogu soo duulay. Beesha dhaawaceeda qaabili jirtay waxa ay ahayd Cumar Maxamuud iyo Gaalkacyo. Marka tolkaa si kasta oo wax idiin dhex maraan iyagaa uun baa kuu dhaama cid kaaga sii shishaysa, aad marka looguma fogaado saa meel cidla ah baa berri lagaa helayaaye.
Haddaan u soo noqdo waxa uu ina Galayr wado waa Dhuloos in la gumeeyo oo reer walba uu dhinac ka tuuro oo aan la tashan oo laysu imaan oo tolkoodna uu ku diro. Sidaasuu rabaaye yaan la yeelin, oo waa diidnay wax la aqbali karona maaha.
Dhinaca kale, ISIMADU ammaan maleh saa iyaga xaggoodaa reerka looga soo dhacaye, lkn shirka ay ku baaqeen waannu ku taageersannahay marka la eego meesha foosha xun ee reerku marayo. Nin kasta oo qaba in aan reerku arrimahooda murugsan ka shirin oo sidaa lagu sii jiro, sida ina Galayrna, waa DAYUUS KHAA’INUL WADDAN AH gacan midig baana wax looga qabanayaa. Wbt